5 Agosto compleanno della Madonna, facciamo gli auguri con questa preghiera | Ilblogdellafede
Ọgọstụ 5, ncheta ọmụmụ Nwanyị nwanyị anyị, anyị na-achọ gị mma n’ekpere a
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 5, 2020 Ọgọstụ 6, 2020
EZI OWO nyere MEDJUGORJE
Afọ iri nke abụọ nke amụrụ m ga-eme ememme ọnwa ise na-esote August. Maka ubochi ahu ka Chineke nyere m ikike inye gi onyinye puru iche ma nye uwa ihe ngozi. M na-arịọ gị ka ị kwadebe nke ọma na ụbọchị atọ iji nyefee naanị m. Naghị arụ ọrụ n’ụbọchị ndị ahụ. Were chapleti gị ma kpee ekpere. Achịcha na achịcha na mmiri. N'ime afọ nile a, enyefewo m onwe m kpamkpam nye gị: ọ karịrị akarị ma ọ bụrụ na m arịọ gị ugbu a ịrara m opekata mpe ụbọchị atọ? "
Ya mere na abali abuo, 2 na 3 nke onwa iri-abuo n’afọ 4, ya bu, n’ime ubochi ato tupu ememe ncheta omumu nke 1984, 2000, onweghi onye n’aru oru na Medjugorje na onye obula nyefere onwe ha n’ekpere, karicha chaplet, na buo onu. Ndị ọhụụ ahụ kwuru na n'ụbọchị ahụ, nne nke nwanyị ahụ mere ememme ahụ yiri ihe ọ particularlyụ nke ukwuu, na-ekwughachi: “Obi dị m ụtọ nke ukwuu! Gaa n’ihu, gaa n’ihu. Nọgide na-ekpe ekpere na ibu ọnụ. Nọgide na-eme m obi ụtọ kwa ụbọchị ”
Abù otuto nye Meri
Ndewo, Meri, ihe kachasi ihe nile e kere eke eke; ndewonu, Meri, nduru mara nma; ndewo, Meri, ọwa ọkụ a na-apụghị ịkọwa; Ndewo, n’ihi na Anyanwụ nke ikpe ziri ezi sitere n’aka Gị.
Ekele, Meri, ebe obibi nke ịdị-ọcha, onye kpuchiere afọ gị nnukwu Chineke, Onye amụrụ nanị ya, na-amịpụta na-enweghị ịkọ ma na-enweghị mkpụrụ, ntị nke enweghị ike ire ere.
Ndewo, Mary, nne nke Chukwu, ndị amụma kwuru, ndị ọzụzụ atụrụ gọziri agọzi mgbe ya na ndị mmụọ ozi ji abụ otuto dị na Bet-lehem: “Otuto dịrị Chineke n’elu-igwe kachasị elu na udo dị n’ụwa nye ndị nwere uche ọma”.
Ndewo, Meri, nne nke Chukwu, a joyụrị nke ndị mmụọ ozi, ọ joyụ nke ndị isi mmụọ na-eto Gi n’elu-igwe.
Ekele, Meri, nne nke Chukwu onye otuto nke Mbilite n’onwu na-enwu ma na-enwu.
← Na post gara aga Gara aga post:Na-atụgharị uche taa maka ịdị umeala n'obi gị n'ihu Chineke
Ọzọ Post → Post ozo:Ezi ofufe n'oge a: ido mmadụ nsọ